အထပ်မြင့်တိုက်ခန်းတွေက သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိလား ? - JAPO Japanese News
လာ 13 Jan 2020, 11:49 မနက်
တိုကျိုမြို့ကြီးမှာတော့မိုးမျှော်တိုက်ကြီးတွေတိုးပွားလျက်ရှိပါတယ်။ မြေဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ရဲ့ အဆင်ပြေတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ချင်ရင်တော့ အထပ်မြင့်တိုက်ခန်းတွေကရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်လာပါတော့တယ်။
အဲဒါက တကယ်ပဲလား ?
ဂျပန်ဆိုတာငလျင်များစွာရှိတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၈၁ ခုနှစ်တွင်
ငလျင်လှုပ်လို့ ပြိုကျသွားတယ်ဆိုတဲ့ တိုက်အမြင့်ကြီးတွေဆိုတာသိပ်မရှိပါဘူး။
တကယ်တော့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ ဂျပန်အရှေ့ပိုင်းတိုကျိုမှာငလျင်အပြင်းအထန်လှုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ငလျင်စံနှုန်းများကိုလိုက်နာပြီးဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့အဆောက်အဦး အားလုံးနီးပါးကတော့ လုံခြုံမှုရှိခဲ့ပါတယ်။
တဖန်၊ တိုကျိုမြို့ဆိုတာကမ္ဘာပေါ်မှာအဆင့်မြင့်ဆုံးနည်းပညာတွေနဲ့ ရေနုတ်မြောင်းစနစ်တွေကိုတည်ဆောက်ထားပြီးလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကို စူးစမ်းလေ့လာတဲ့ကိရိယာတွေတပ်ဆင်ထားလို့ အားလုံးလုံခြုံပါတယ်လို့လည်း ပြောကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် 2019 ခုနှစ်မှာတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း 19 ကြောင့် ဒီလုံခြုံမှုရှိပါတယ်လို့ပြောကြတာတွေဟာ အားလုံးပြိုကျသွားပါတယ်။
Musagikosugi၊ Kanagawa စီရင်စုမှာရှိတဲ့ ၄၇ ထပ်တိုက်ခန်းဟာ ဘယ်လိုမှမထင်မှတ်ထားတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ . . .
အဆိုပါတိုက်ခန်းကတိုက်ခန်းအဆောက်အအုံရဲ့မြေအောက်ခန်းထဲသို့ ကျွန်၀င်သွားပြီး switchboard ကိုချိုးဖောက်ကာလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်စေတဲ့အထိဖြစ်သွားပါတယ်။
အဆိုးဆုံးကတော့မိလ္လာရဲ့နောက်ပြန်စီးဆင်းမှုကြီးပါ။ အပေါ်ထပ်ရှိလူတွေကအိမ်သာကိုသုံးပြီးတဲ့ရေတွေဟာ အောက်ထပ်မှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့အိမ်သာသုံးတဲ့သူတွေဆီထပ်ရောက်လာပါတော့တယ်။ မစင်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတော့တယ်။
ဆိုးဝါးတဲ့အနံ့တွေရယ်၊ အလုပ်မလုပ်တော့တဲ့ဓာတ်လှေကားရယ်. . .
ပိုပြီး ပြင်းထန်တာကတော့ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများရဲ့တုန့်ပြန်မှုဖြစ်တဲ့
အဓိကဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုကြုံတွေ့ရတဲ့အခါ၊ ဒေသခံများအနီးအနားရှိကျောင်းတွေမှာစုဝေးစေဖို့ပါ။ အဲလိုနေရာတွေကကာကွယ်ဖို့၊ ခိုလှုံဖို့နေရာရှိပေမယ့်
၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ကနေဒါ၊ တိုရွန်တိုရှိအရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုရဲ့အသင်းဝင်တစ်ယောက်ဟာ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့သူကိုကယ်ဆယ်တဲ့တစ်ခုစီအတွက်စာရင်းပြုစုတဲ့အခါမှာ 25ထပ်(သို့မဟုတ်)ထိုထက်ပိုတဲ့အလွှာမှာရှိတဲ့သူကိုအရေးပေါ်ကယ်တင်ဖို့ဆိုရင်
ရှင်သန်နိုင်နှုန်းဟာ 0% ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အချိန်ကန့်သတ်ချက်အရ၊ အချိန်ကာလကြာမြင့်ချိန်အရ မြင့်မားတဲ့တိုက်ခန်းအလွှာမှာနေသူမဟုတ်ရင်တော့ကူညီနိုင်ဖြစ်ခြေ၊ဖြစ်နိုင်ခြေပိုပြီးမြင့်မားလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီသတင်းကိုကြားပြီးတော့ ငလျင်တို့တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းတို့ ဂျပန်လောက်မရှိတဲ့ မြန်မာမှာ နေရတာ လုံခြုံတယ်လို့ဆိုရပေမယ့်. . . အထပ်မြင့်မှာနေတဲ့မြန်မာပြည်သားတွေအတွက် ကတော့ အနည်းငယ်တော့စိတ်မသက်မသာဖြစ်ရတယ်နော်။
အဲဒါတောင် အထပ်မြင့်တိုက်ခန်းမှာနေချင်တယ်လို့တွေးမိသေးလားဆိုတော့ကာ. . . ?
ငါးမျှားရတာဝါသနာပါတဲ့အဖေရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အကြံဥာဏ်